Nhau - Thyh Metal Fabrication Finishing Services
Thyh Metal Fabrication Finishing Services: Deburring, polishing and Painting
Deburring uye polishing ndiwo akakosha ekupedzisa maitiro mukugadzirwa kwesimbi, anodiwa pamberi pedanho rekupedzisira rekupenda.
Deburring inobvisa mabhura anogona kuitika panguva yekugadzirwa kwesimbi. Kunyange zvazvo maburrs achiwanzova madiki, anogona kukonzera nyaya dzegungano kana kukanganisa kutendeseka kwezvikamu zvakapedzwa kana zvikasabviswa. Iyo deburing process inobvisa idzi njodzi dzinogona kuitika.
Deburring inosanganisira akasiyana manyore uye mechanicha maitiro:
Kucheka: Kudhiraivha, mafaera, ma scrapers, mabhurashi, akasungwa abrasive nzira, mechanika edgers kana muchina deburring.
Power brushing: Inoshandisa simbi filament mabhurashi mune zvakasiyana siyana zvinhu, maumbirwo uye saizi. Inokurumidza uye inodhura-inoshanda.
Bonded abrasive finishing: Nzira yekuisa jecha inoshandisa mabhandi, machira, mapedhi, madhisiki kana mavhiri. Anonyanya kuzivikanwa mabrasives ialuminium oxides, silicon carbide, kana zirconia compounds.
Abrasive blasting: Inofambiswa nemhepo, abrasive blasting inogona kuitwa yakanyorova kana yakaoma.
Kupedzisa kweMisa kunobvumira zvikamu zvakawanda kuti zvibviswe uye kupedzwa panguva imwe chete. Iri rinogona kunge riri danho rekupedzisira mukupedzisa kwezvikamu zvinoshanda. Nzira dzinosanganisira kupera kwevibratory, kudonha kwembiya, uye kupera kwecentrifugal.
Electropolishing inzira isiri-mechanical, isiri-distorting deburring nzira inowanzoshandiswa kubvisa burrs kubva kune dzakaoma kana dzisina kusimba zvikamu.
Iyo yakakodzera deburring process inoenderana nehukuru uye chimiro cheburr, uye chii chichatora kuti chibvise pasina kukuvadza iyo yakagadzirwa simbi chikamu. Vese maMetals 'vagadziri vane hunyanzvi vanogona kuona yakanakisa deburring uye yekupedzisa maitiro kuti uwane chaiyo zvikamu.
Iyi simbi yekupedzisa maitiro ndeimwe yematanho ekupedzisira ekugadzira, mushure mekucheka laser, kuumba kana kukotama, kubvisa uye mamwe maitiro ekugadzira simbi. Kupukuta kunobvisa chero maminiscule burrs asara, uye obva aiputira kusvika kumagumo. Chinangwa chekupedzisira chekupenya kwesimbi inzvimbo yakatsetseka inokodzera chirongwa chako.
Metal polishing inoshandisa abrasive compound yakanamatira kune vhiri kana bhandi rinopa kukwesha. Mamiriro esimbi pakutanga kwekupenya ndiyo inosarudza rudzi rweabrasive yatichashandiswa kugadzira yatinoda kupera. Isu tine hunyanzvi hwemumba uye hukama hwakakosha hwemutengesi kuti tipedze chero simbi yaunoda kupera, kubva pa#3 kumera kusvika #8 girazi uye zvese zviri pakati.
Thyh Metals Fabrication inopa huwandu hwakazara hwekugadzira uye kupedzisa masevhisi, anosanganisira laser kucheka, kukotama, kuumba, kubvisa, kupukuta nekupenda. Kuve chitoro chimwe chete zvinoreva kuti iwe unogona kuvimba nemaitiro emhando kubva pakutanga kusvika kumagumo eprojekiti yako yekugadzira simbi.
Wakagadzirira kuona kuti maitiro edu chaiwo anogona kupa sei kupedzisa kubata kune yako simbi yekugadzira purojekiti? Kumbira mutengo pano uye imwe yenyanzvi yedu yekutengesa uye yekufungidzira vashandi vanozofara kukufambisa iwe kuburikidza nepurojekiti yako inotevera.
Kusarudza kupera kwepende inhanho yakakosha mukugadzirwa kwesimbi. Pendi yakakodzera kupera inogona kurebesa hupenyu hwezvikamu zvesimbi uye kugadzirisa chitarisiko. Isu tine ruzivo rwemumba uye hukama hwakakosha hwemutengesi kuti tiite kupenda zviri nyore semajasi ekutanga uye akawedzera seKynar uye enamel pendi. Isu tinokodzera kupa yakanakisa pendi mhando uye dziviriro kune chero mhando yesimbi kana chirongwa.
Kuisa pendi papepa resimbi kwakafanana nekuisa pendi kune dzimwe nzvimbo. Tinotanga nevhu rakachena resimbi kuti tibvise chero tsvina kana ngura, tobva tashandisa rust-inhibiting primer pasimbi dzine ferrous. Iyo primer jasi inoteverwa neakawanda akaturikidzana epende, uye kupedzisa nekuvhara kwekudzivirira. Tinogona kupenda simbi ine ferrous uye isiri-ferrous.
Painting uye top coat services inosanganisira:
Mvura-based latex primers
Inoenderana nemauto CARC inopera
Chikwata chedu chekugadzira uye mainjiniya achashanda newe kuti usarudze kuti ndeipi pendi yekupedzisira inokodzera yako simbi yekugadzira purojekiti uye bhajeti. Taura nemaneja weprojekiti kuti uwane yakanakisa simbi yekupedzisa application yeprojekiti yako.